Qalabka Calaamadaha Webka - Talobixin yar
Gawaarida (Google Chrome extension)
Barnaamijyo kala duwan oo aan ahayn barnaamijyada iyo freelancers ayaa doorbidaya Woqooyi sababtoo ah sifooyinka muuqda. Qalabka macluumaadka sayniska ee GUI waxay ku xakameyn kartaa bogagga shabakadaha asaasiga ah iyo kuwa sare iyo tiknoolajiyada barashada mashiinka weyn si looga dhigo shaqadaada mid sahlan. Mashruucaan waxaa si gaar ah loogu talagalay in laga soo saaro xogta laga soo bilaabo Amazon, eBay, iyo goobo kale oo isku mid ah oo leh dhismo spam . Halkaa, si sahlan ayaad ku arki kartaa spam ee xogtaada oo laga qaadi karo hal daqiiqo ama laba. Waxay leedahay laybereeriga macaamiisha ee Google API gaar ah si loo helo fiirin wanaagsan oo xogtaada ku kaydisa xogta gaarka ah. Waxaad sidoo kale xogta u kaydin kartaa dariiqa adag ama qalabka kale ee doorashada.
Soo dejinta. io
Iibsiga. Haa, uma baahnid inaad noqotid farsamo-maskaxeed waxayna xoqin kartaa xogta tayo sare leh si joogto ah. Codsigan shabakada internetka ayaa sheeganeysa in ay ka hor istaagtay baahida loo qabo barnaamijyada aan aqoonta lahayn iyo kuwa sayniska. Sida aynu ognahay in sayniska xogta looga baahan yahay tirakoobka iyo xisaabta, xirfadaha barnaamijka, laakiin uma baahnid inaad waxbarto si aad u isticmaasho. io. Qalabkani wuxuu ku habboon yahay shakhsiyaadka iyo ganacsatada.
Kimono Labs waa shabakad furan oo shabakadeed oo madax furan. Waxay xoqin kartaa xogta laga helo goobo badan oo ka mid ah goobaha daqiiqadaha. Waxay ku timaadaa mid bilaash ah oo lacag la'aan ah waxayna ku habboon tahay shakhsiyaadka aan farsamada ahayn. Iyadoo Kimono Labs, uma baahnid inaad barato Python ama luqad kale oo barnaamij kale ah. Hawlgalkooda horay loo sii qorsheeyay ayaa kaa caawinaya inaad muujiso xogtaada ama bogagga internetka ee kala duwan. Waa inaad soo dejiso oo aad bilawdo barnaamijkan isla markaana u ogolow Kimono Labs inay xoqdo xogta adiga oo ku jira xaalad daqiiqo ah. Neefsigiisu wuxuu ku xiran yahay inaad si fudud oo degdeg ah u wadaagto macluumaadka qalabka kala duwan. Kimono Labs waxaa isticmaala shirkado, suxufiyiin, dukaamada onlineka, wakaaladaha isgaarsiinta, iyo kuwa madaxbanaan.
Facebook iyo Twitter API
Macluumaad weyn ayaa ah mushkilad weyn oo loogu talagalay shakhsiyaadka websaydhka iyo kuwa aan farsamada ahayn. Sidaa darteed, waxay badanaa isticmaalaan Twitter iyo Facebook APIs si ay u helaan macluumaadkooda la xoqay. API waxay naga caawineysaa in aan soo saarno macluumaad faa'iido leh oo laga helo bogag iyo blogs kala duwan, waxaanay saadaalin ku samaysaa sida loo saxo oo loo xafido xogta marka si buuxda loo xoqo.Qeybta ugu wanaagsani waa API in mawduuca mareegaha si sahlan loo isticmaali karo, qaab la akhrin karo oo loo qaabisan karo. Waxay bixiyaan muuqaal wanaagsan oo ah xogta la xoqay, waxay u kala soocaan qaybo kala duwan, ama keena noocyo kala duwan sida rabitaankeena iyo shuruudaheenna. Waa inaad isticmaashaa warbaahinta bulshada ee API haddii aad tahay qof aan farsamo ahayn oo aan lahayn xirfadaha barnaamijka Source .